Toerana 6 hitsidihana mandritra ny dia mankany Beirut | Vaovao momba ny dia
Maria | | Libanona, Fitsangatsanganana any Azia
Sary avy amin'ny International Business Times
Manamorona ny Ranomasina Mediteraneana amin'ny lafiny iray ary ny tandavan-tendrombohitra eo an-daniny hafa, Libanona, na eo aza ny faritra kely misy azy, dia tany tso-drano amin'ny endriny, ny kolontsaina ary ny gastronomie. Nandritra ny tantara, ny toerana misy azy manokana dia nahasarika olona marobe izay nandao ny marika hananganana an'i Libanona maoderina.. Ny lovany dia hita any amin'ireo toerana arkeolojika miely manerana ny firenena.
Avy amin'ny sarcophagi fenisianina sy ny tempolin'i romana ka hatrany amin'ny tranon'i Crusader sy moskea Mamluk. Na aiza na aiza no ahitanao fijoroana ho vavolombelona momba ny lasa nanan-karena. Izany no antony tsy maintsy ankafizin'ny firenena mahavariana toa izao. Miaraka aminay amin'ity fitsidihana ny renivohitra Beirut ity ve ianao?
Imbetsaka rava ary imbetsaka no namboarina, Beirut dia tanàna marolafy sy mavitrika feno fifanoherana izay mifangaro ao Atsinanana sy Andrefana amin'ny fomba mahafinaritra.
Beirut dia gaga amin'ireo mpandeha noho ny tantara manankarena sy ny hatsaram-panahin'ny mponina ao aminy. Ny tanàna dia miorina amin'ny vinavina eo afovoan'ny morontsiraka andrefana ny firenena, noho izany dia mihetsika maharitra izy ary misokatra amin'ny tombontsoa ara-barotra sy ara-barotra rehetra. Na izany aza, ivon-kolontsaina lehibe ihany koa izy satria manana oniversite, tranombakoka, teatra ary tsangambato marobe.
1 National Museum of Beirut
2 Moske Mohammad al-Amin
3 Kianja maritiora
4 Toerana masin'i San Charbel
5 Al Hamra manodidina
6 Vatolampin'ny voromailala
Anisan'izany, ny National Museum of Beirut dia misongadina, miaraka amin'ny fanangonana arkeolojika manan-danja indrindra mifandraika amin'ny Prehistory, ny vanim-potoana varahina, ny vanim-potoana vy, Greece, Roma, ny vanim-potoana Byzantine ary ny fandresen'ny Arabo tamin'ny andron'ny Mamluks.
Ny kintan'ny fanangonana dia tsy isalasalana fa ny sarcophagus an'i Ahiram, mpanjakan'i Byblos, izay misy soratra avy amin'ny abidia fenisianina. Nosokafana tamin'ny 1942 ny National Museum of Beirut.
Ny tranombakoka hafa hitsidika azy dia ny American University Museum sy ny Sursock Museum, izay misy sary hosodoko, sary vongana ary sora-tanana mahaliana.
Moske Mohammad al-Amin
Io no moske malaza indrindra ao Beirut ary tena tandindon'ny tanàna. Mampiavaka azy ny habeny lehibe, ny dome manga misy azy izay mifanohitra amin'ny endrika beige, natao tamin'ny fomba nentim-paharazana, izay misy minareta efatra.
Eo afovoan-tanàna ny tempoly ary misy ny fasan'ny praiminisitra teo aloha Rafiqu Hariri, novonoina tamin'ny 2005. Ny atitany dia voaravaka amin'ny an-tsipiriany ary ny gorodona rakotra karipetra goavambe. Tsy maintsy manarona voaly ny vehivavy mba hahazoany miditra.
Iray amin'ireo tandindon'i Beirota ihany koa ny Kianja Martyrs, izay manana tsangambato izay mijoro ho vavolon'ny ady nifandonana taloha. Ny kianja dia eo akaikin'ny Moske Mohammad al-Amin.
Toerana masin'i San Charbel
Sary avy amin'ny WorldLatino.net
Ny fasan'i Mompera Charbel dia toerana masina misy ny sisa tsy simba an'ny pretra libaney mahagaga izay niaina nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Nomena toerana masina ho an'ny fahagagana isan-karazany izy ary niaina toy ny herita tany amin'ny monastera Anaya izay ahitàna ny vatany tsy mety lo ankehitriny. Liana te hahafanta-javatra sy mahatoky an'arivony maro tonga tao amin'ilay toerana fivahinianana masina mba hangataka amin'i Père Charnel hitalaho ho azy ireo.
Al Hamra manodidina
Izy io dia iray amin'ireo faritra mavitrika indrindra any Beirut noho ny maha-faritra ara-barotra mavitrika azy ary amin'ny lafiny iray hafa noho ny fisian'ny Oniversite Amerikanina any Beirut, iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny firenena. Ny làlambe lehibe indrindra dia ny Hamra Street, izay mamakivaky ny faritra West Beirut iray manontolo ary feno trano fivarotana, kafe, trano fisakafoanana ary fisotroana.
Ny manodidina an'i Al Hambra no toerana mety hahitanao ny gastronomiana lebaney manankarena. Ny sakafo eto amin'ity firenena ity dia mifandraika amin'ny "mezze" (picada) izay misy karazana fanombohana, voaravaka tsara, izay aroso alohan'ny hazakazaka lehibe. Ny sasany amin'ireny dia: hummus (puree champea misy paty sesame), mutabbal (baranjely miaraka amin'ny paty sesame), tabbule (salady varimbazaha tsara, voatabia sy persily), arabo warak (nofonosina ravina voaloboka), labne (yaorta voahidy menaka oliva sy tongolo lay) na fattush (salady maitso misy mofo maina), ankoatry ny maro hafa.
Tsy afaka manadino tsindrin-tsakafo isika. Ny sasany amin'ireo soso-kevitra indrindra dia ny gilasy atsinanana (manitra manokana), daty, manga, mananasy, baklava (mamy malaza indrindra any Andrefana vita amin'ny dibera, tahini, kennuts, vovo-kanelina, tantely sy siramamy), halva (karazana marzipan miendrika terrine vita amina tahine dia asiana siramamy ao aminy ary mety feno pistachio, amandy na voanjo kesika) na graibe (cookies kely misy amandy miendrika "S" izay voaravaka almond iray manontolo) .
Mba hisaintsainana ny filentehan'ny masoandro mahafinaritra any Beirut, maro no mankeny amin'ny torapasika na any amin'ny Rocks of the pigeons, eo anoloana ny araben'i Raouche.. Hita avy amin'ny Corniche ireo ary mamorona andohalambo tokana voasokitra voajanahary amin'ny vatolampy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Toerana 6 hitsidihana mandritra ny dia mankany Beirut
Ahoana ny fampiasana ny ambim-bolanao vahiny any iTunes